Iyo yeruzhinji beta yeIOS 14 yave kuwanikwa, tinotsanangura maitiro ekuiisa | IPhone nhau
Iyo yeruzhinji beta yeIOS 14 yave kuwanikwa, tinotsanangura maitiro ekuiisa
Kutevera kuburitswa kwechipiri Beta yeIOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, uye macOS Big Sur, Apple yakafunga kuvhura yekutanga yeruzhinji Beta yeaya masisitimu. Iyi vhezheni inogona kuiswa isina kuve anovandudza, uye isu tinotsanangura kuti tingazviita sei nhanho nhanho.
Kana iwe uchida kuyedza dzese nhau dzeIOS 14, iPadOS 14 kana chero mamwe masisitimu ayo Apple akatizivisa masvondo mashoma apfuura uye izvo zvisingazosvika zviri pamutemo kusvika kudonha uku, ikozvino unogona kuzviita mahara uye usingatore kurodha pasi profiles kubva kunzvimbo dzisingavimbike. Apple inopa Ruzhinji Beta chirongwa, icho chinomhanya zvishoma zvishoma kupfuura vanogadzira, uye inowanikwa kune chero munhu ane inoenderana Apple chishandiso.
1 iOS 14 uye iPadOS 14
2 macOS 11 Huru Sur
iOS 14 uye iPadOS 14
Kana iwe uchida kutora chikamu muchirongwa cheRuzhinji Beta unofanirwa kudzvanya pa Iyi link kune yepamutemo Apple saiti. Kana iwe uchitove wakanyoreswa mushandisi kubva apfuura makore, tinya pa «Sign In», uye kana iwe uri mutsva zvachose, tinya «Sign Up». Paunenge uchinge wazadza muakaundi yako ruzivo uye wagamuchira chibvumirano neApple, unofanirwa kufamba uchibva pane chishandiso chaunoda kuisa iyo Beta a Iyi link. Rangarira, iwe unofanirwa kuzviita kubva kuchinhu icho chaunoda kuisa iyo Beta. Iwe unogona kubvunzwa zita rako rezita reApple uye password zvakare. Iye zvino ingori nyaya yekuisa Ruzhinji Beta Mbiri pane yako kifaa nekudzvanya pa "Dhawunirodha Mbiri" uye uchitevera matanho ekumisikidza, mushure meizvozvo iwe unozotangazve Kana izvi zvaitwa, Ruzhinji Beta rinofanira kuoneka mukati meSystem Zvirongwa.
macOS 11 Huru Sur
Kana iwe uchida kuisa iyo macOS Beta, maitiro acho akatosiyana. Panzvimbo pekurodha pasi nekuisa pane yako Mac, unofanira kukopa chikumbiro kuburikidza Iyi link. Kamwe yaiswa, iyo yekuvandudza kune macOS Big Sur ichaonekwa mune yehurongwa masisitimu. Kana yako Mac yatove kunyoreswa muPublic Beta chirongwa, haufanire kutevedzera nhanho idzi, iyo yekuvandudza ichangooneka. Parizvino macOS Big Sur Veruzhinji BEta haisipo, asi inotarisirwa kubuda mumazuva mashoma anotevera.
Maitiro acho achave akafanana neayo eiyo iPhone, asi watchOS 7 Ruzhinji Beta haisati yavapo. Inenge iri nguva yekutanga iyo Apple Watch inopinda muchirongwa cheRuzhinji Beta, asi isu tichafanirwa kumirira kwechinguva. Ramba uchifunga kuti iwe unofanirwa kuve neyako iPhone pane iOS 14 futi, saka kana iwe uchida kuyedza watchOS 7 unogona kuisa iOS 14 kutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Iyo yeruzhinji beta yeIOS 14 yave kuwanikwa, tinotsanangura maitiro ekuiisa
Unreal Injini inotangisa chishandiso chinoshandisa 3D kumeso kumeso kwakatorwa neFace ID
Mahara AirPods neApple "Dzokera Kuchikoro"